Golden Cocker Retriever: Bụ 'Ruo Mgbe Ebighị Ebi' nwa n'ezie? - Reeddịrị
Mara site na aha dị iche iche - Golden Cocker Eweghachiri , Igbo Nkasi Obi Golden , Dakota Sport Retriever , ma ọ bụ n'ụzọ dị mfe Cogol , ngwakọ a bụ ngwakọta nke Cocker Spaniel na Golden Retriever.
Inwe ndị nne na nna a ma ama, ọ dị mfe ịhụ ihe kpatara nkịta a na-emepụta aha ya dịkwa na ịrị elu.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmata ihe kpatara mmadụ niile ji na-agba ara Ebighebi nwa nkita , nọrọ anyị ma nọgide na-agụ akwụkwọ!
Kedu ihe ngwakọta Golden Retriever & Cocker Spaniel dị?
Kedu ka ọ dị ka ịnwe Golden Cocker Retriever dị ka anụ ụlọ?
Nlekọta chọrọ maka Dakota Sport Retrievers
Nsogbu ahụike nke Golden Cocker Retriever nwere ike inwe
Zụta Golden Cocker Retriever nwa nkita
Goldendoodle megide Golden Cocker Retriever
Uru & ọghọm nke Golden Retriever na Cocker Spaniel mix
Cogol bụ dị ọhụrụ gaa na canine ụwa, dịka anyị kwurula na mbụ, ọ bụ ya crossbreed mkpụrụ nke Golden Retriever na Cocker Spaniel.
E wezụga ịbụ akụkụ nke AKC’s Otu egwuregwu , inweta ntakịrị ihe banyere ndị ọcha dị ọcha n’ile anya na omume ga - enyere anyị aka ịmụtakwu banyere Cogol.
Ezigbo enyi na enyi enyi Golden Retriever
Na-akpọsị m mbọ Goldie ma ọ bụ Ọlaedo , typedị Retriever na mbu bred dika egbe nkịta na UK. Ọ bụ ezie na ha bụ canine nke atọ kachasị ewu ewu n'ụwa niile, ụdị a bụ n'ezie kewaa uzo abuo - dị ka ndị enyi ịchụ nta na dịka anụ ụlọ ma ọ bụ nkịta na-egosi.
Otu njirimara dị iche iche nke ịchụ nta Golden Retriever na-enwe uwe ojii na mkpụmkpụ.
Onu ogugu nke Goldens tozuru oke nwere ogologo nke 21 ruo 24 sentimita (53 ruo 61 cm) na ịdị arọ nke 55 ruo 65 n'arọ (kilogram 25 ruo 29). A na-amata ha maka ha ọla edo, silky akpọchi , na a obiọma okwu nke ahụ ga - eme ka ha ghara ịnagide anụ ụlọ na nnabata.
Golden Retrievers abụghị naanị enyi na enyi mana ọzọkwa nwere ọgụgụ isi . Ha nwere ike ịbụ kpochapụwo ezinụlọ nkịta ma bụrụ nnukwu nhọrọ maka enyi canine ma ọ bụrụ na ị nwere ụmụaka, mana ọ bụrụ na ị banye n'ime mmuo egbe ha, ha ga-enwe ọ andụ ma nwekwaa oke n'ịchụso bọọlụ tennis na frisbe.
Nwa bebi na-n'anya Cocker Spaniel
Ndị na-agba ọka a na-ahụkarị na ihe nkịta na ha ntutu ntutu isi na anya nkịta na-enye onye obula uto nke okwu uto ha. A na-ahụ ha n'anya maka anya ha na-eji ntị ha na aji ha na aji na-asọ mgbe ọ bụla ha na-agba ọsọ.
Ha nwere ike ịdị ka ụdị nwere ntutu nwere ike achọghị ịmebi, mana ha pụtara n'ụzọ nkịtị acho ka emetu aka !
Site na elu nke naanị 13.5 ruo 15.5 sentimita (34 ka 39 cm) ma dị ihe dịka 20 n'arọ 30 (kilogram 3 ruo 13.5), ụdị a bụ AKC kacha nta .
Ewezuga ịbụ onye ọjọọ na iji anya ha rọrọ nrọ wee pụọ n'ihe ọ bụla, Cocker Spaniels bụ nọ n'ọrụ, mụrụ anya, ma nwee ọgụgụ isi . Ha dịkwa nwayọọ ma nwee obi ụtọ obere doggos.
Nwere ike ịjụ, ọ bụ ya American Cocker Spaniel ma ọ bụ English Cocker Spaniel so na ngwakọta?
Dị nnọọ ka Golden Retrievers, Cocker Spaniels nwere ahịrị abụọ dị iche iche: akara ngosi na ahịrị .
Na United States, a na-akpọ Cockers na bred dị ka anu ulo ma ọ bụ maka conformation ihe ndị America Cocker Spaniels. Ndị a na-azụ ka ha gaa n'ihu na ịchụ nta na UK ka a na-akpọ Bekee Cocker Spaniel.
Ndi AKC na-amata Golden Cocker Retriever?
Ndi American kennel Club amataghi ndi ozo, ma American Canine ngwakọ Club na-eme.
Onye nkasi obi mbụ nkasi obi (aha mbụ nke ngwakọta a) sitere na 2003. Site na 2009, International Canine Designer Registry ghọtara ụdị ahụ ma gbanwee aha ya na English Comfort Golden ma ọ bụ Dakota Sport Retriever iji zere iji ya eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi.
Tupu anyị na-akọwa nke a pooch, buru n'uche na ọdịdị anụ ahụ nke ụdị ụdị dị iche iche nwere ike ịdị iche , na ọ bụghị mgbe niile ọkara Golden Retriever na ọkara Cocker Spaniel. O nweghi otu nwa nkita o bula ya na ndi ozo.
Kwesịrị, ndị nzube àgwà nke Cocker Spaniel-Golden Retriever obe bụ uwe ogologo, ogologo floppy, na obere ụlọ karịa Goldies.
Tupu anyị agaa n'ihu, lee vidiyo ngwa ngwa iji nye gị echiche nke ihe Golden Cocker Retriever nwere ike ịdị ka:
Ọtụtụ oge, ngwakọ a yiri ka mini Golden retriever , ma o nwere sara mbara jiri ya tụnyere Cocker Spaniel. Ha nwere anya miri emi nke nwere ubé almọnd nke nwere ike ịbụ ndo nke aja aja, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, acha anụnụ anụnụ, ma ọ bụ nke na-acha uhie uhie. Ha ntị dị nnọọ ogologo karịa Goldens, ha na-emetụ agba aka.
Golden Cocker Retrievers nwere ike ịnwe ọdụ nke gbagọrọ agbagọ, ogologo, na isi. Offọdụ n’ime ha nwere ike inwe ajị ajị n’etiti mkpịsị ụkwụ ha.
Amụghị amụma bụ ngwugwu ngwugwu mgbe ị nwetara crossbreed dị ka enyi canine. Yabụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmara ihe nwa gị ga-emecha pụta, nke a nwere ike ọ gaghị abụ ụdị maka gị.
Size: Gịnị kpatara eji akpọ Golden Cocker Retrievers akpọ nkịta ebighebi?
Enweela okwu na-aga gburugburu na a kọwara nkịta a na-emepụta ihe dị ka 'nwa nkịta ebighebi,' na-azọrọ na ọ ga-anọgide na-abụ nwa bekee nke Golden Retriever na ọdịdị. Ọ bụ ezie na nke a bụ eziokwu maka ụfọdụ n'ime ha, ọ bụghị nkịta ọ bụla ga-etolite ma ọ bụ nọrọ otu.
Na mkpokọta, Golden Cocker Retriever nwere ike itolite ebe ọ bụla 13.5 na 24 sentimita asatọ (31 ruo 61 cm) n'ịdị elu. Maka ibu, ọ nwere ike ịkarị kilogram iri na abụọ (ma ọ bụ kilogram iri na otu) ma ọ bụ arọ dika kilogram iri atọ na abụọ. Ọtụtụ n’ime ha ga-ada n’etiti ọnụ ọgụgụ ndị ahụ, nke dị gburugburu 30 ruo 45 pound (14 ka 20 n'arọ).
Ha nwere ike pere mpe, mana mmega ahụ achọrọ nke Golden Cocker na-eme ka ha dabara adaba ụlọ ndị nwere nnukwu ogige ma ọ bụ ebe na obodo . Ha nwere ike ịdị mma na ụlọ, kwa. Naanị jide n'aka na ọ bụghị oke oke, ma hapụ nkịta gị ka ọ rụọ ọrụ kwa ụbọchị.
Kedu maka ihe egwuregwu ụmụaka ma ọ bụ nke obere nke Golden Cocker Retriever?
Dị ka 'Ruo Mgbe Ebighị Ebi' bụ a nke onye ma obu ikwu okwu , enwere ụzọ iji nweta ụdị agwakọta a ga-adị obere maka oge ndụ ya niile.
Anyị kwuru banyere obere Golden Retriever, nri? Ugbu a, gafee ya na Cocker Spaniel, ị ga-enwetakwa Obere Golden Cocker Retriever. Ọ bụrụ na ị na-eche etu esi eme obere Goldies, ha nwere ọla edo na ihe egwuregwu / obere poodle maka ndị nne na nna.
Wayzọ ọzọ iji mepụta obere Golden Retriever-Cocker Spaniel crossbreed bụ ihe na-ekwekọghị n'okike na anabataghị.
You maara na ụfọdụ fidos na-ele obere obere ma mara ezigbo mma bụ ụlọ nyocha? Ha na-arịa nsogbu ọkpụkpụ a na-akpọ dwarfism . Ihe ọtụtụ ndị na-amaghị bụ n’ezie na-ewetara ha ahụ erughị ala, ọtụtụ ihe ụfụ, ha ga na-enwe nsogbu ahụike n’oge ndụ ha niile.
Nwere ike ịtụle ihe a mgbe ọ bụla a nwara gị ịzụta obere na teacup nsụgharị nke ụdị nkịta.
Uwe na agba nke Cocker Spaniel-Golden Retriever cross
Gị enyi nwere ụkwụ anọ nwere ike ịnwe ogologo aji dị ka Cocker, ma ọ bụ dị mkpụmkpụ dịka Goldie. Ma ị nwere ike ijide n’aka na ọ bụ ezigbo na silky , nke a hụrụ na nne na nna dị ọcha.
Ha nwere ntutu na-eguzogide mmiri , na kootu na-enyere ha aka ịmị ọkụ.
Anyị enweghị ike ịtụ anya na Cocker Spaniel & Golden Retriever mix niile nwere uwe ọla edo, n'ihi na Cockers nwere agba dị iche iche. A hụrụ nne ma ọ bụ nna a na nwa, ọcha, acha ọcha na ọcha, ojii na uhie, ọbara ọbara, acha anụnụ anụnụ, chocolate, parti-color, roan, na merle.
Nkịta a na-emepụta abụghị hypoallergenic. Cocker Retriever Spaniels bụ agafeghị oke na nnukwu shedders n'afọ niile.
Yabụ, na ụdị mgbanwe a niile, ịrịọ arịrịọ a nwere obe bụ ihe omimi pụrụ iche.
Inweta ihe ngosi site na udiri nne na nna ya, nke a kari anyi obi ụtọ, ụtọ, egwuregwu, nọ n'ọrụ, na ọgụgụ isi . Na ị nwetara ya nri! Ndị a bụ àgwà ga-eme ka ha bụrụ a nnukwu anụ ụlọ , ọbụna ndị nwere ụmụaka!
Ọ bụghị naanị nke ahụ, mana ha na ndị nkịta ibe ha na-emekọrịta ihe nke ọma ma nwee ike bụrụ ezigbo ọrụ nche .
Anyị chọrọ imesi ike ịchụ nta nke ndị nne na nna Cogol, ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na ha ga-eketa nke ha ike anụ oriri . Ọ bụrụ na ị nwere nwamba, òké, nnụnụ, ma ọ bụ obere anụ ọ bụla ọzọ, anyị anaghị akwado gị ka ị nweta furball a.
Dịkwa ka ndị ya, amabeghị fido a maka iwe iwe. N'agbanyeghị nke ahụ, nkịta niile, n'agbanyeghị ogo ma ọ bụ ọdịdị, nwere ike ama ma ọ bụ aru mgbe ọ bụla ha nọ n’ọnọdụ ndị a na-amaghị ama ma ọ bụ mee ka ha maa jijiji.
Ihe ị nwere ike ime ma ọ bụrụ na ị na-eleta onye nwere anụ ụlọ ndị ọzọ ka etinyere ya ọnụ, nke bụ ihe ngwọta nke ọtụtụ ndị nwe ya na-eme. Ewezuga nke a, ịkpakọrịta mmekọrịta na ọzụzụ bụ azịza ya.
Ikwu okwu banyere trainability, ọ gaghị abụ nsogbu na Cocker Spaniel & Golden Retriever mix n'ihi na ha bụ na-achọ ime ihe na-atọ m ụtọ . N'oge ọzụzụ, na-echeta mgbe niile na nke a pooch bụ enwe mmetụta ọsọ ọsọ , ya mere kwuo okwu n’emeghị ihe ọ bụla dị ka nkịta gị ga-emerụ ahụ ngwa ngwa.
Dị nnọọ njikere maka ihe gbasiri ike pup ma zụọ ya ngwa ngwa o kwere mee.
Cocker Retriever Spaniels nwere ike ịdịtụ iche na omume ndị mụrụ ha, mana ọbụlagodi ndị nwere ezi mmụọ nwere ike ịnwe omume gafere ụkpụrụ.
Dị ka otu n'ime ụdị anụ ahụ ndị na-eje ozi dị ka nkịta ndị mmadụ, ị ghaghị n'ezie ịbụ onye nwe ahụmahụ iji nweta ngwakọ a dị ka anụ ụlọ.
Otu ihe nwere ike ịchọ oge gị bụ ejiji, dị ka fido a akwa mmezi mgbe abia na ntutu ha.
Jikere maka ejiji
Na uwe ogologo, mara mma, ị nwere ike ịdị njikere maka nke a. Inwe Golden Cocker Retriever pụtara na ị biliri ihicha ya ajị otu ugboro ugboro atọ n'izu , na-asa ahụ ọ bụla izu isii na asatọ , kpọta ya na onye omenkà ọkachamara ugboro abụọ n'afọ .
Na-ele anya na mkpa Goldens na Cockers na-edozi ahụ, ha nwekwara uwe mkpuchi ndị na-enweghị ike ịhapụ ịnọ ogologo oge. Ha nwere ntị, ntutu obi, na uwe ogologo ọkpa nke nwere ike ịdị mgbagwoju anya ma mebie. Yabụ ndị a bụ akụkụ nke ị ga-elebara anya kwa ụbọchị.
Ọ bụrụ na Dakota Sport Retriever ketara ntutu isi nke Cocker Spaniel, mgbe ahụ ị nwere ike ịnweta ndụmọdụ ịhazi ụlọ ole na ole na vidiyo a:
Ọrụ ndị ọzọ kwa izu na-adaba n'okpuru ụdị a bụ ihicha ma hichaa ntị (karịsịa mgbe ịsachara ma ọ bụ igwu mmiri), ịkpụcha mbọ aka gị, na ịsa ezé. Ọ bụrụ na ọ nọ na nri nri mmiri mmiri, mgbe ahụ, nlekọta ezé kwesịrị ime kwa ụbọchị.
Ha nwere nri nri pụrụ iche?
Mba, ha anaghị. Achịcha kpọrọ nkụ, nri mmiri mmiri na nri na-enweghị nri - ụdị nkịta ọ bụla nwere uru na ọghọm ha.
Ihe ndị ị ga-atụle mgbe ị ga-achọpụta otú ị ga-esi nye nkịta gị nri bụ afọ ya, ogo ya, ọkwa ọrụ ya, yana ụfọdụ ọrịa.
Na mkpokọta, ọ kachasị mma ịzụrụ Golden Cocker Retriever gị akọrọ kibbles na-mere maka ọkara- na nnukwu-sized nkịta . Thedị ụdị ụdị nri nkịta a na-enyere aka wepụ ezé ezé na ezé gị nwa, nke dị mma ma ọ pụtara na ọ nwere ike ibelata mkpa ọ dị ịchacha ezé.
Ihe ọtụtụ ndị nwe ha na-eme bụ ile anya n'azụ akpa nkịta maka ndụmọdụ ahụ. E nwere ụzọ ka mma karịa inye enyi enyi gị nri dabere na ọnụọgụ iko. Fọdụ nwere ike ikwu na obe Golden Retriever-Cocker Spaniel obe chọrọ maka 2 iko nke kibbles. Mana ọ ka mma ịnye calorie kwa ụbọchị nke anụ ụlọ gị chọrọ n'ezie.
Maka nke a, ha kwesịrị inye nri Calori 1,000 kwa ụbọchị ma nwee ihe ruru 13% abụba na protein 25%.
Mee mmega iji zere oke ibu na nsogbu ahụike ndị ọzọ
Anyị kwuru na mbụ na nke a bụ ụdị ume, dịka Goldie na Cocker Spaniel. Ọ bụ ya mere a gbara ogige (playpen for pups) bụ ihe dị mkpa nke ga - ekwe gị nkwa na nkịta gị ga - arụ ọrụ ma na - egbochi ya ịkpafu.
Nke ahụ ezughị, n'agbanyeghị. Gbaa mbọ hụ na ị nọpụrụ iche Nkeji 45 ruo 60 nke ụbọchị gị iji wepụ Cocker Retriever maka ịgagharị, egwuregwu, ma ọ bụ ibugo onu. E nwere oge ndị ha ga-achọ abụọ mmega iji zere ike gwụrụ ike.
Mgbe ị nọ n'ime ụlọ ma ọ bụ na ịnweghị ike ịkpọpụ ya n'ihi ihu igwe na-adịghị mma, egwuregwu dị mfe dịka ozi kpọtara nwere ike ịrụ ọrụ. Ozugbo anyanwụ dasịrị, gwọọ nkịta gị maka ịrụ ọrụ dịka trekking nke ahụ ga-eme ka afọ ju ya. Ọ bụghị naanị n'ihi mgbanwe nke ịma mma na isi ọma, mana ị wepụtara oge iji soro ya nwee mmekọrịta.
Dị ka ha na-ekwu, nkịta nkụda mmụọ bụ nkịta obi ụtọ . Na-arụ ọrụ gị site na ijide n'aka na ọ ga-anọ n'ọnọdụ, ọ ga-egbochikwa omume na-adịghị mma.
Ọ bụ ihe a na-ahụkarị ịnụ okwu ahụ ngwakọ ngwakọ jikọtara na ụdị dị iche iche agwakọtara, nke pụtara na ha ga-enwe ogologo ndụ ma e jiri ya tụnyere ndị na-amụ ha ọcha. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ ga-ekwe omume ka canines ndị a mepụta ọrịa mkpụrụ ndụ ihe nketa.
Also ga-atụlekwa ọgbọ nke inbreeding nke na-eme ka ndị na-akpata obe bụrụ ndị na-arịa ọrịa ole na ole.
Goldens na Cockers bụ ụdị ndị na-ewu ewu, mana na-enweghị nkwekọ nke ha nwere ike ịgafe na ngwakọta Golden Retriever & Cocker Spaniel.
Bredị nne na nna nwere ike ịta ahụhụ site na njide nke metụtara hip na ikpere ikpere dysplasia , yana akwụkwụ na-adọ .
Ndị na-ewepụta ọla edo na-adaba na hypothyroidism na akpụ cell mast.
Cocker Spaniels nwere nsogbu ahụike dị ka glaucoma, cataracts, seborrhea (ọrịa akpụkpọ), ọrịa imeju, na nkụchi obi.
Ndị a bụ maka ịdọ aka ná ntị dị ka Dakota Sport Retriever nwere ike ọ gaghị eketa ọnọdụ ndị a.
Ewezuga ọrụ ndị nwe - ọrụ nri, ejiji, mmega ahụ, ị ​​nwere ike ịnweta nwa nkita nke sitere na Goldies na Cockers ndị ruru agadi. Otú ọ dị, ọ bụghị ụmụ nwanyị! Ekwesighi iji nkịta nwanyị meworo okenye eji eme ihe maka ozuzu.
Kwesịrị ịzụrụ naanị ụmụ nkịta site na ndị na-azụ ihe na-ebute ọdịmma ahụike nke ngwaahịa ozuzu ha na ahịhịa ha ụzọ. Nke a nwere ike ịbụ ihe ịma aka, mana iji ezigbo akwụkwọ na ndekọ ahụike nke nkịta, gbakwunye ezigbo akara ọmụmụ, ị nwere ike were ndị ahụ dịka ezigbo ihe ịrịba ama.
Maka ndimmadu ndu, ma Golden Retriever na Cocker Spaniel na-ebi ezigbo ndụ na ogologo ndụ. Yabụ, anyị nwere ike ịtụ anya otu ihe ahụ maka ọgịga ndị agwakọtara ha na ndụ ha n’ozuzu ọ dịkarịa ala afọ iri .
Thegwọ nke crossbreed nke Cocker Spaniel-Golden Retriever nwere ike imetụta ihe ndị dị ka ebe onye na-azụ ihe ma ọ bụ ebe obibi, usoro ọmụmụ nke ụmụ nkịta, ọzụzụ, na ụfọdụ, ụgwọ njem.
Maka Golden Cocker Retriever nwa nkita, na-atụ anya ịkwụ ụgwọ ebe ọ bụla $ 500 ka $ 2,000 .
Ọ ga-aba uru ọ bụla ma ọ bụrụ na ịmara na ị na-azụrụ onye òtù ezinụlọ ọhụrụ gị n'aka onye na-azụ anụ a ma ama na-anabata ajụjụ ma jụọ ndị dị mkpa na nloghachi. Onye ahụ kwesịkwara ikwe ka gị kwe gaa leta nkịta na ụlọ ha , na-agba gị ume ka ị chọpụta ma mata nne na nna na ụmụ nkịta ha.
Onsrụ Ọrụ Dịịrị breed nwekwara a akụkọ ihe mere eme nke nleta ụmụ anụmanụ, ule mkpụrụ ndụ ihe nketa, na nkwa ahụike.
Golden Retriever & Cocker Spaniel mix ndị na-eme ihe
Ọ bụrụ n ’ọ dị gị ka ị dị njikere ileba anya n’ ụmụaka ole na ole, ị ga - ebido chọgharị na ntanetị site na ịga na webụsaịtị nke Dakota Winds Ranch nke ahụ dị na Madisonville, TN. E nwekwara Taylormade Mini Goldens nke ahụ bụ na Ugo Ugwu, UT.
Ka ọ dị ugbu a, ha bụ naanị ụlọ ntanetị nke nwere Goldie na Cocker mix. Ma, enweghi nsogbu na ịlele Golden Cocker Retrievers dị na Nwa nkịta .
Dakota Sport Retrievers maka ikuchi ma ọ bụ nnapụta
Inghọrọ iji nkịta bụ ezigbo omume. Ọ dịkwa mfe na akpa dị ka ha na-adịkarị ihe ruru $ 300 . Nwere ike ịmasị ịnye mmụọ ozi ajị anụ ochie, yana ndị ọzọ Golden Retriever ma ọ bụ Cocker Spaniel jikọtara ohere ọzọ ka a hụ gị n'anya ma nwee ụlọ ọhụrụ.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Eluigwe Golden Retriever Rescue (Capon Bridge, WV)
Oldies ma Goodies Cocker Nnapụta (DC, MD, na VA)
Nnapụta nnapụta na Colorado (Evergreen, CO)
The Golden Retriever / Cocker Spaniel obe na-ma tụnyere ma ọ bụ hiere ụzọ dị ka Ngwunye Golden & Poodle mix . Fọdụ na-achọ ịmata ihe njikọ njikọta nke mmebe a ma ọ bụ mmekọrịta ya na Goldendoodle. Ha bụ crossbreeds abụọ dị iche iche.
Otu myirịta bụ na obere Golden Retriever nwere ike ịbụ ngwakọta nke Golden Retriever na Poodle ma ọ bụ Cocker Spaniel.
N'iji ha tụnyere, Cogol nwere ike ịdị obere karịa, dịka Goldendoodles nwere ogo kachasị elu 20 sentimita asatọ (50 cm) na ike itu 50 ruo 90 pound (22 ka 40 n'arọ). Ọ bụrụ na enwere ọtụtụ mkpụrụ ndụ Cocker na ngwakọta Cogol, mgbe ahụ ha nwere ike pere mpe karịa Goldendoodle.
Nke a Poodle mix nwere kootu uwe na nwere ohere ka mma ịbụ hypoallergenic . Ọ na-eme ka Goldie-Poodle gafee nhọrọ ka mma maka ndị nwere ihe nfụkasị ma ọ bụ ga-ahọrọ obere aji gburugburu ụlọ ha.
Kwesighi inweta Dakota Sport Retriever ma ọ bụrụ na ị na-etinye oge ka ukwuu n'ụlọ pụọ ka ha dị enwe ike iwepụ nchekasị . Ọ bụ ụdị nke kwesịrị ekwesị maka ndị nne na nna paw na-achọ ihe nọ n'ọrụ enyi candy ọ na-enwe mmasị iwepụta oge n'èzí.
Ma ebe ha nọ agafeghị oke na nnukwu shedders , ha dị elu na-elekọta ha ma na-achọ ntachasị anya ugboro ugboro. Na nke ahụ kwuru, ọ bụghị maka ndị nwere ihe nfụkasị ahụ.
Ọ bụrụ na ịnweghị nsogbu nke dander ma nwee obi ụtọ ịnọ na njem, Cogol bụ ihe nkịta ezinụlọ dị mma nke ahụ bụ nke a na-enye ọzụzụ, na-ahụ n'anya, nke obi-ụtọ, ma nwee nsọpụrụ.
Anyị na-agba gị ume ka ị nweta ngwakọ a ma ọ bụrụ na ị naghị elekwasị anya na 'Ebighebi nwa nkita' na akara aka a. Ọ bụ egwuregwu zuru oke ma ọ bụrụ na ọ gbasara maka ihe ị nwere ike inye dị ka ezinụlọ ma nye ịhụnanya o kwesịrị na ndụ ya niile.
Soro anyị kwenye gị gbasara Golden Cocker Retriever. Nke ka mma, ọ bụrụ na ị nwere nkịta a, gwa ndị agbata obi anyị hụrụ ha n'anya etu ha dị!
Ihe Anyị Maara Banyere Hip Dysplasia na Nkịta
Cavachon: Eziokwu gbasara Ezigbo Ezinaụlọ
Kedu ihe nkịta kacha mma maka ụlọ nyocha?
Chọta Onye Nlekọta onsrụ Ọrụ Dịịrị: Atụmatụ 7 maka yingzụta Nkịta
Onye Ọzụzụ Atụrụ Dutch: Nduzi Nzuzo Kachasị Nzuzo Nye Onye Na-azụ Atụrụ Brindle
Ndi Australian Shepherd Blue Heeler mix di nma maka gi?
Aha 500 kacha mma aha ụmụ amaala America
Ntuziaka kachasị na Onye Ọzụzụ Atụrụ White German
Chihuahua Ogologo Ogologo - Nduzi Nzuzo Zuru ezu
Agba Pomeranian: Ndepụta nke Agba Niile 13 Amata Uwe Akara
ókè-ala collie Australian Shepherd mix puppies
kedu ka brindle agba dị ka
agba aja aja aja aja aja aja aja aja aja
onye ọzụzụ atụrụ German isi awọ na ọcha
boston terrier agwakọta ya na french bulldog
© 2022 | Ikike Niile Echekwabara